कहाँ कुर्सीको सान - कहाँ सडकको पीडा ! | नेपाली पब्लिक कहाँ कुर्सीको सान - कहाँ सडकको पीडा ! | नेपाली पब्लिक
कहाँ कुर्सीको सान – कहाँ सडकको पीडा !
नाकाबन्दीका ती दिनहरू- काठमाडौँको सेरोफेरो
नेपाली पब्लिक २०७६, २८ श्रावण मंगलवार १५:२२
०४५ नाकाबन्दीको बीचमा चारखाल पुगेको छु। त्यो नखुल्दै सरुवा पनि भएँ। दृश्य रूपमा भारतसँग ट्रेड ट्रिटी रिन्यु नभएको फल भन्थे। अरू कुरा बाहिर आएनन्। स्थानीय प्रशासकको हैसियतले त्यसले ल्याएका समस्यासँग जुध्नेमा म पनि छु।
इन्धनको स्टक सीमित छ। जेजति सम्भव छ, सवारी साधनहरू वर्गीकरण गरिएको छ। अलगअलग स्थानबाट कुपन पाउँछन्। मट्टितेलको हकमा नगरपालिका र गाउँ पञ्चायतहरूले जिम्मेवारी लिएका छन्। काठमाडौँ नगरपालिका वार्डहरूले निर्धारित कोटा र मापदण्डअनुसार कुपन वितरण तथा विक्री–वितरण केन्द्र तोक्छन्। सर्वसाधारणले हप्ताको एक दिन तोकेको समयमा लिन्छन्। त्यो बेला ग्यासको चलन थिएन। खाना बनाउने प्रमुख साधन मट्टितेल नै थियो। वितरण केन्द्रहरूमा लामो लाइन लाग्छ। चारखाल अफिसबाट घर फर्किंदा मैतीदेवी मन्दिरको छेउमा प्रायः देख्ने गर्छु।
एकदिनको घटना – भीमसेनगोला वितरण केन्द्रमा लामो लाइन बाँकी हुँदै स्टक सकिएछ। कतै केही बेइमानी पनि हुँदो हो। जनता आन्दोलित भएका छन्। समस्या चर्किने स्थिति छ। कसैको हिजैदेखि खाना नपाकेको होला। अब आज पनि चूलो बल्ने स्थिति छैन। कतिको घर–डेरामा बच्चाहरू, बिरामी छन्। आक्रोशको रूप लिँदैछ। प्रहरीले गर्ने केही छैन। वितरकले भन्छ, स्टक सकियो के दिने? तर, कुपनअनुसार मट्टितेल चाहिएको छ। यस्तै कुरा साढे ९ बजेतिर प्रहरीले खबर गर्छ।
काठमाडौँ नगरपालिका वार्डहरूले निर्धारित कोटा र मापदण्डअनुसार कुपन वितरण तथा विक्री–वितरण केन्द्र तोक्छन्। सर्वसाधारणले हप्ताको एक दिन तोकेको समयमा लिन्छन्। त्यो बेला ग्यासको चलन थिएन। खाना बनाउने प्रमुख साधन मट्टितेल नै थियो। वितरण केन्द्रहरूमा लामो लाइन लाग्छ। चारखाल अफिसबाट घर फर्किंदा मैतीदेवी मन्दिरको छेउमा प्रायः देख्ने गर्छु।
लाग्छ, त्यस्तो बेला वितरण केन्द्रमा खटिएको प्रहरीले विनाच्यानल सजिलै गरी समस्या सुनाउन सकिने अरू को हुन सक्थ्यो होला र? जसले तत्कालै समाधानको बाटो खोज्न बल पुर्‍याओस्। प्रहरीको सही कदम थियो।
परिस्थिति नयाँ छ। मेरो सरकारी यात्रामा यस्तो पहिलो घटना। सुतिसकेको वा सुत्ने बेलामा अञ्चलाधीश, सचिव, जी.एम. कसलाई कसरी भन्ने? समस्या टार्न सक्ने अर्काे को होला? त्यो बेला टेलिफोनको मोटो डायरी हुने गर्थ्यो। निगमका दोस्रो तहका अधिकारीबाट कतै मद्दत पुग्छ कि झिनो आशाले फोन गरेँ। संयोग भनौँ, लामो रिङपछि फोन उठ्छ। मेरो आग्रह छ– केही उपाय हुन्छ कि ! जवाफ छ– ड्राइभरहरू, ट्याङ्करहरू यो बेला हुने गर्दैनन्। के गर्न सकिएला र? तै पनि कोही भेटिन्छ कि? नभन्दै खबर आउँछ– मट्टितेल जाँदैछ। सायद उहाँको नाम मोहन थियो। ती अधिकारी धन्य छन्। कति हल्कासँग त्यो जटिलता हल भएको थियो। मेरो वचनको रक्षा भएको थियो।
नाकाबन्दीसँग व्यक्ति–व्यक्तिका अनेकौँ व्यक्त, अव्यक्त व्यथाहरू जोडिएका होलान्। कति स्मृतिमा रहन पनि छाडे। तैपनि एउटा मार्मिक प्रसङ्ग घरीघरी आइरहन्छ। कार्यालयमा सहकर्मी भाइ रामप्रसाद कोइरालाको टेबुल। एक जना पाको व्यक्ति अन्यमनस्क स्थितिमा टेबुलको वरपर गर्छ। कुर्सी खाली छ, बस्न मन छैन। रामप्रसादजीको आग्रह छ, भित्र जाँदा हुन्छ। किन हो उहाँको मन मान्दैन। प्रसन्नता छैन। चिट पठाउँ त – त्यो पनि स्वीकार्य छैन। म गएर खबर गरौँ त – त्यसमा पनि आनाकानी छ। संयोग भनौँ, त्यसैबेला कतै जान कोठा बाहिर निस्किएछु। देख्छु – उदास चेहरामा वरपर गर्दै। मलाई देखेर शर्म मानेझैँ लाग्छ।
वृद्ध व्यक्ति स्वाभिमानको बोझ पनि होला। परिस्थिति यस्तो रहेछ – घरमा कोही बिरामी वा सुत्केरी छ। बिहानदेखि चूलो बलेको छैन। यति सानो कुरा कसरी भनौँ। दुःख दिने मन छैन। हातमा छ कि छैन? पाइने हो कि होइन? वचन खेर जाने पो हो कि? यस्तै यस्तै आन्तरिक द्वन्द्वको अलमल रहेछ। यो मार्मिक प्रसङ्ग कसैको नभएर, आदरणीय अग्रज योगप्रसाद चापागाइँको हो। भिनाजुको साइनो पनि छ। जागिर शुरु गराउन उहाँको योगदान कसरी बिर्सन सक्थेँ र?
निगमका दोस्रो तहका अधिकारीबाट कतै मद्दत पुग्छ कि झिनो आशाले फोन गरेँ। संयोग भनौँ, लामो रिङपछि फोन उठ्छ। मेरो आग्रह छ– केही उपाय हुन्छ कि ! जवाफ छ– ड्राइभरहरू, ट्याङ्करहरू यो बेला हुने गर्दैनन्। के गर्न सकिएला र? तै पनि कोही भेटिन्छ कि? नभन्दै खबर आउँछ– मट्टितेल जाँदैछ। सायद उहाँको नाम मोहन थियो। ती अधिकारी धन्य छन्। कति हल्कासँग त्यो जटिलता हल भएको थियो। मेरो वचनको रक्षा भएको थियो।
केही वर्षपछि फेरि अर्काे नाकाबन्दी आउँछ। समय बदलिएछ। अब मट्टितेलको होइन, ग्यासको लाइन छ। त्यो लाइनमा म पनि छु। साथमा छौँ, टोलका बटुक ढकाल, हरि कोइराला, बलराम श्रेष्ठ सहितका साथीहरू। बिहान ४ बजेदेखि नै सडकमा छौँ। आउने समय ठेगान छैन। ढिलो आउनेहरू रित्तै। डिलरवालाको अर्कै फूर्ति। सवाल–जवाफको समय छैन। हामीसँग धैर्य छ। आज लिनु छ। एक पाइला ढिलो भयो कि अर्काेले उडाइहाल्छ। ग्यास आउन पाएको छैन। कहाँ कहाँका नयाँ फूर्तिला युवाले झ्याम्म छोपेजस्तो।
क्त्ऋ ग्यास लिन केही सहज हुने कुरा आयो। दौडेर पेप्सीकोला पुगेर एउटा सिलिन्डर ल्यायौँ। ललितपुरतिरबाट कसैले एउटाले पठाइदिएछ। छेउछाउमा त्यसको डिपो छैन। इतिहासको कुनै कालखण्डको उपहारका रूपमा सजाएका छौँ। हुनसक्छ, भोलि आवश्यकता परोस्।
चिनजानका आशलाग्दा साथीहरू हराएजस्तै छ। सहयोग गर्न चाहे पनि कति सम्भव थियो र? यस्तैमा एउटा अचानक हर्षको विषय बन्छ– सोच्दै नसोचेको मूल्यवान। कुरा डी.आई.जी. देवेन्द्र सुवेदीको सौजन्यतामा एक जर्किन पेट्रोल हात पर्छ। हेटौँडादेखिको सम्झना। खुसीको माहोल छ, अब गाडी चल्ने भयो।
त्यसपछि त कति हो कति आ–आफ्ना योजना। तालमेल मिलाउनै कठिन। घरझगडा होला जस्तो। तर, हिम्मत बढाएको छ। इमर्जेन्सीमा राहत पुग्छ। पछि उहाँ एआईजीमा रिटायर हुनुभएछ।
पेट्रोल लिन गाडीहरू लाइनमा छन्। कतै कतै पेट्रोल आउँदैछ – खबर आउने गर्छ। रीतपूर्वक वितरण हुन्छ। कहिलेकाहीँ निराश भएर फर्कनुपर्छ। कहिलेकाहीँ सबैलाई पुग्दैन। शुरुमा दिन थालेजति पछिकाले पाउँदैनन् पनि। ज्ञानेश्वर पम्पमा पेट्रोल सकिन्छ। लाइनमा म पनि छु। कसैले कालोपुल छेउको पम्पमा तेल बाँडिँदैछ भन्छ, हत्त–न–पत्त त्यता लाग्छौँ। पुग्दा ज्ञानेश्वरमा तेल सकियो भन्नेहरू नै गाडी यता–यता, उता–उता भन्दै छन्। अलिक पछि तिनैले तेल सकियो भन्छन्। लाग्छ, कसैको पेसा बनिसकेको छ। कतै न कतै बेइमानी छ। तापनि यस्तै यस्तै जटिलताका बीच दिनचर्या चल्दैछ।
घण्टौँ लाइन, थकान, भोकै–तिर्खै, अन्यमनस्क स्थिति। उपाय छैन। सानो कुरा ठूलो भएको छ। पहिलोपटक स्वाभिमान बन्धक राखुँ–राखुँ लाग्छ। त्यो पनि के नै थियो र ! अघिल्लो नाकाबन्दीमा इन्धनको जटिलताभित्रको काठमाडौँको प्र.जि.अ. र प्रजातन्त्रकालीन ६ जना प्रधानमन्त्रीको सचिव भएको दर्जा, बुढौतीमा फुलेको कपाल मात्रै न हो। बन्धक खोटो पनि हुन सक्छ। सायद ठीक समय छैन।
घरमा धेरै कचकच। प्रहरीको पम्पमा लाइन लाग्न पुग्छु। त्यहाँ सहज छ भन्ने हल्ला छ। मेरो पालो आउँदासम्म स्टक सकिन्छ वा वितरण बन्द हुन्छ। खबर हुन्छ, बसुन्धराछेउ कतै प्रहरीको पेट्रोलपम्प रहेछ, त्यहाँ जानुहोस्। पुग्न हिम्मत छैन, नपाएमा फिर्ता हुन पेट्रोल पुग्दैन। पाउने ग्यारेन्टी छैन। यहाँ जस्तै हुन के बेर ! अघिअघि अरू पम्पहरूमा यस्तो भोगेकै छ। कतै लिखित सूचना छ कि? खोज्छु, देख्दिनँ। गाडी हटाउन कडिकडाउ छ। घण्टौँ लाइन, थकान, भोकै–तिर्खै, अन्यमनस्क स्थिति। उपाय छैन। सानो कुरा ठूलो भएको छ। पहिलोपटक स्वाभिमान बन्धक राखुँ–राखुँ लाग्छ। त्यो पनि के नै थियो र ! अघिल्लो नाकाबन्दीमा इन्धनको जटिलताभित्रको काठमाडौँको प्र.जि.अ. र प्रजातन्त्रकालीन ६ जना प्रधानमन्त्रीको सचिव भएको दर्जा, बुढौतीमा फुलेको कपाल मात्रै न हो। बन्धक खोटो पनि हुन सक्छ। सायद ठीक समय छैन।
कुनै बेलाको विशेष जिम्मेवारीको पहिचान, पेन्सन थियो नै। मूल्य त्योभन्दा किन ? लाग्छ– निरीहता यस्तो पो। कन्टेनरमा फालेको फोहोरभन्दा कति फरक होला र? रित्तो उदास मन लिएर फर्कंदै गर्दा तँछाडमछाड गर्दै विचारहरू आउँछन्। एक मनले भन्छ – न्याय त यस्तो पो, किन मलाई फरक? मैले पनि आफ्नो समयमा कुन चाहिँ धन्यवाद पाउने काम गरेको हुँला र विशेष हुनुपर्ने। फ्रन्टलाइनको प्रहरीले आदेशको पालना गर्ने मात्रै न हो। उसको विवेकको ठाउँ कहाँ रहला र? नाकाबन्दीको यो सत्कर्मलाई ग्यासको पाइप लाइनले अझ बल दिने होला कि ! आफ्नै मर्ममा चोट पुर्‍याउन सक्ने धन्य नाकाबन्दीका अभियन्ताहरू।
टेम्पो ड्राइभर रमा भन्छिन्, बाजे यो बस होइन। डिस्काउन्ट मिल्दैन। हेर्नुस् त पीपलको बोट – तपाईंको स्टेसन। चाँडै ओर्लनुहोस्।